Posted by Tranquillus | Aogositra 8, 2020 | Ny fahaiza-manaon'ny serasera sy ny serasera
Tsy toy ny fomba fiasa rehetra napetraka amin'ny andrim-panjakana sosialy toy ny CPAM na CAF. Ny mpiasa iray manantena ankizy dia tsy voatery hanaraka ny iray amin'ireo fomba fanaingoana ireo. Tsy misy fepetra ara-dalàna hanerena azy ireo hampahafantatra ny mpampiasa azy ny fialan-tsasatry ny fialan-tsasatra araka ny fe-potoana voafetra.
Na izany aza dia atokana noho ny antony azo ampiharina mba tsy hitarain-potoana loatra. Satria ny fanambarana momba ny fitondrana vohoka dia miteraka tombontsoa sy zo sasany. Ny fanambaràna ny fitondrana vohoka dia miaro amin'ny mety hitranga. Mba hanana fangatahana fanovana toerana. Ny fahazoana alalana tsy misy fahazoan-dàlana hialana amin'ny fizahana ara-pitsaboana. Na ny safidy fialana raha tsy misy fampilazana.
Mandra-pahoviana no miala ny fiterahana?
Ny andininy L1225-17 amin'ny fehezan-dalàna momba ny asa dia mamaritra fa ny vehivavy bevohoka rehetra dia tsy maintsy omena fialan-tsasatra manakaiky ny ora tokony hiterahana. Io fe-potoana fitsaharana io dia miankina amin'ny isan'ireo zaza andrasana sy ireo efa miankina.
Raha tsy misy ny fepetra mahazatra mahazatra kokoa, ny faharetan'ny fialan-tsasatry ny reny voalohany dia manomboka 6 herinandro alohan'ny daty fiterahana antenaina. Antsoina hoe fialan-tsasatra prenatal, mitohy mandritra ny 10 andro aorian'ny fiterahana. Antso fialan-tsasatra aorian'ny fiterahana, izany hoe maharitra 16 herinandro. Amin'ny trangam-bokatra telo dia 46 herinandro ny faharetan'ny fotoana tsy maha eo azy.
Raha ianao no reny reharehan'ny triplets telo. Azonao atao ny misafidy ny hanafoana ny ampahany amin'ny fialan-tsasatry ny reny. Saingy tsy azo ahena ambany 8 herinandro izy io ary tafiditra ireo herinandro voalohany aorian'ny fiterahana.
HAMAKY Ny Tetik'asa Voltaire dia mandray anao amin'ny fifaninanana ara-pinoana mahafinaritra
Inona no mitranga raha misy fitarainana mandritra ny fitondrana vohoka?
Amin'ity tranga ity dia miresaka fialan-tsasatra pathological isika. Mpiasa iray marary noho ny fitondrana vohoka na manana fahasarotana aorian'ny fiterahana. Soa azo avy amin'ny fialantsasatra ara-pitsaboana fanampiny nomen'ny dokoterany. Ity fialan-tsasatra ity dia hitoviana amin'ny fialan-tsasatry ny reny ary amin'ity tranga ity dia voasaron'ny mpampiasa 100%. Ny andininy L1225-21 ao amin'ny fehezan-dalàna momba ny asa dia manome ihany koa farafahakeliny 2 herinandro alohan'ny fanombohan'ny vanim-potoana fiterahana sy 4 herinandro aorian'ny fiafaran'ny fialan-tsasatra aorian'ny fiterahana.
Manao ahoana ny fiverenan'ny asa?
Ny andininy L1225-25 amin'ny fehezan-dalàna momba ny asa dia mamaritra fa rehefa tapitra ny fialan-tsasatry ny mpiasa iray. Ity farany dia hiverina amin'ny asany na asa mitovy aminy sahala amin'ny karama mitovy aminy. Ho fanampin'izay, araka ny lahatsoratra L1225-24, ny fotoana lany amin'ny fialan-tsasatra dia isaina ho vanim-potoana mitovy amin'ny asa tena izy ho an'ny fikajiana ny karama sy ny zokiolona. Ny fizaham-pahasalamana dia mbola atao ao anatin'ny valo andro voalohany aorian'ny fiasana.
Ny fomba tsara indrindra hitaterana ny fialan-tsasin'ny reny amin'ny zanakao?
Iray amin'ireo fomba natokana ho an'ny vehivavy miasa dia ny fampahafantarana ny vohoka amin'ny alàlan'ny mamaritra ny datin'ny fialan-jaza. Izany rehetra izany amin'ny taratasy fisoratana anarana miaraka amin'ny fanekena ny fandraisana na ny fandraisana. Amin'izany dia zava-dehibe ny tsy adino ny mametaka taratasy fanamarinana momba ny fitondrana vohoka.
Amin'ny sisa ao amin'ny lahatsoratra dia hahita taratasy taratasy fanambaràna momba ny fitondrana vohoka ianao. Ity modely ity dia natao hanondroana ny daty hialanao amin'ny fialana. Ary koa taratasy santionany fampandrenesana ny fialan-tsasatrao nalefa ho an'ny mpampiasa anao raha misy fitarainana. Raha manana fanontaniana momba ny zonao ianao dia manontania solontena mpiasa na fiarovana ara-tsosialy.
HAMAKY Sonia mailaka matihanina
Ohatra isa 1: Mail hanambara ny maha-bevohoka azy sy ny daty nialany tamin'ny fialan-tsasatry ny reny
Anaran'ny orinasa izay miasa aminao
Lohahevitra: fialan-tsasatry ny fiterahana
Andriamatoa talen'ny Human Resources,
Faly be aho manambara ny fahatongavan'ny zanako vaovao.
Araka ny voalaza ao amin'ny taratasy fanamarinana ara-pitsaboana mifamatotra, ny fahaterahany dia antenaina amin'ny [daty]. Noho izany dia tiako ny tsy hanatrehana ny [daty] ary hatramin'ny ary ampidirina ao anaty [daty] ny fialan-tsasatry ny reny mifanaraka amin'ny fepetra voalazan'ny andininy L1225-17 amin'ny fehezan-dalàna momba ny asa.
Misaotra anao tamin'ny fanamarihana ity sy hijanona eo am-panombohananao fanazavana fanampiny.
Miandry ny fanamafisana ny fanekenao momba ireo daty ireo, azafady manaiky, Andriamatoa Tale, sefo malalako indrindra.
Ohatra nomerao 2: Mailo hampahafantatra amin'ny mpampiasa anao ny datin'ny fialan-tsasatrao amin'ny pathological.
Lohahevitra: fialan-tsasatra Pathological
Nampahafantariko anao tamin'ny taratasy teo aloha ny momba ny fitondrana vohoka. Mampalahelo fa niharatsy ny toe-pahasalamako tato ho ato ary ny dokoterako dia nametraka 15 andro fialan-tsasatra pathological (Article L1225-21 of the Labor Code).
Noho izany, amin'ny alàlan'ny fametrahana ny fialan-tsasatra ananako sy ny fialan-tsasin'ny reny. Tsy ho ao (daty) mankany (daty) ary tsy manomboka amin'ny (daty) ka hatramin'ny (daty), araka ny nomanina voalohany.
Alefako aminao ny taratasy fanamarinana ara-pitsaboana mamaritra ny zava-misy amiko ary koa ny fijanonana amin'ny asako.
Miankina amin'ny fahatakaranao, miangavy anao aho hanaiky, Andriamatoa Tale, ny fanalahidako tsara indrindra.
Download "Mail manambara ny fitondrana vohoka sy ny datin'ny fialany amin'ny fialan-tsasatra"	taratasy-hanambara-ny-bevohony-sy-ny-daty-niala-jaza-1.docx – Nalaina in-343 – 13 Kio
HAMAKY Inona no fehezan-teny manara-penitra tokony hanaraka ny rafitra “Mihantona…”?
Download "Taratasy hampahafantarana ny mpampiasa anao ny datin'ny fialan-tsasatrao 2"	taratasy-hampahafantatra-ny-mpiasa-nao-ny-daty-n'ny-nao-pathological-leave-2.docx – Nalaina in-320 – 13 Kio
Lazao ny fialanao amin'ny fialan-tsasatry ny mpampiasa anao 13 Febroary 2022Tranquillus
Teo alohaFampandrosoana matihanina ho an'ny famolavolana matihanina-matihanina
manarakaMialà tsy misy fanamarihana, zo ho an'ny vehivavy bevohoka
Lisitra misy bala ary mora vakiana